कांग्रेस कता ? यता न उता | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
कांग्रेस कता ? यता न उता
संसदीय आकारका दृष्टिले अहिले सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । आकारमा ठूलो भएकाले बुद्धि र व्यवहारमा पनि ऊ नै सबैभन्दा परिपक्व हुने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । तर, नेपाली कांग्रेस समाधान दिने पार्टी नबनेर समस्या सिर्जना गर्ने पार्टी भएको छ । अगुवा पार्टी नभएर पछुवा पार्टी बनेको छ । अरुका लागि अनुकरणीय र उदाहरणीय पार्टी बन्नुपर्नेमा नकारात्मक प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पार्टी बनिरहेको छ । समकालीन नेपाली घटनावलीमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ? देशलाई समाधानमा लैजान कांग्रेसको दृष्टिकोण के छ ? कार्यक्रम के छ ? बरु एकमुखे रुद्राक्ष खोज्दा पाइएला तर कांग्रेसको दृष्टिकोण पाइँदैन ।
दु:खद कुरा इतिहासमै पहिलोपल्ट दृष्टि र दृष्टिकोणविहीन पार्टीको पर्याय बनेको छ, शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस † हरेक पार्टी आआफ्नो विधिविधान र नियमावलीले चल्छ । तर, कांग्रेसमा विधान कता छ खोज्नुपर्ने भएको छ । आफ्नै पार्टीको विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पार्टीले देशको संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? गंभीर प्रश्न उठेको छ । अहिले सत्ता साझेदार पार्टी हो कांग्रेस । सरकार संचालनमा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ? सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन् जो तेस्रो ठूलो पार्टीका नेता हुन् । सरकारमा सहभागी भएपछि सरकार संचालन तथा सरकारको काम बारे न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न पनि कांग्रेसलाई वास्तै छ्रैन । खासमा कांग्रेसको ध्यान कता छ ?
सरकारमा माओवादी केन्द्र हावी छ र कांग्रेसको साथमा मन्त्रालय र मन्त्री छन् तर सरकारमा उपस्थिति अनुभूत गर्न सकिंदैन । सरकारका काम र कार्यक्रममा आफ्नो चुनाव घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले यो अडान लियो भनेर देख्न सुन्न पाइएको छैन । हो, कांग्रेसले अडान लिन्छ तर शुभ लाभकारी नियुक्तिहरुमा मात्र । अर्बौं अर्बको ठेक्कापट्टा र खरिदबाट आर्थिक लाभ हुने क्षेत्रमा कांग्रेसका मन्त्री तथा नेताहरुले ध्यान दिएको देखिन्छ तर अन्य क्षेत्रमा वास्तै छैन । चुनाव गर्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा त झन कांग्रेसको धारणा के हो भन्ने फिटिक्कै बुझ्न सकिंदैन । यसका नेताहरु किंकर्तब्यमूढ हालतमा देखिन्छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जे बोल्छन् कांग्रेसको धारणा त्यही हो भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति मात्र होइन, मधेसी मोर्चाका एकसिटे पार्टीका नेताले के बोल्छन् कांग्रेसको धारणा त्यही हो भनेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छ ।
अवस्था यतिमा मात्र सीमित छैन, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विभिन्न च्यानलले व्यक्त गर्ने भारतीय धारणा जे हो कांग्रेसको धारणा त्यही हो भनिठान्नुपर्ने लाजमर्दाे अवस्था छ । अहँ, कहीँकतै कांग्रेसले आफ्नो उपस्थिति र प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । यसका नेताहरुले बोलेका कुरा मिडियाको प्रमुख समाचार बन्न छाडेका छन् । किनभने कांग्रेसको अबको रणनीति यसका नेताहरुको मुखबाट भन्दा प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताहरुको मुखबाट आउँछ भन्ने स्थापित हँुदै गएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको हालत यस्तो दयनीय छ भने पार्टीको आन्तरिक जीवन पनि बेहाल बन्दै गएको छ । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पद सम्हालेको २०७२ चैतबाट आज २०७३ माघ २४ गतेसम्म गन्दा एघार महिना पूरा भयो । उनले निर्वाचित हुनासाथ विधान अनुसार, पार्टी पदाधिकारीहरु मनोनयन गर्छु भनेका थिए । पार्टीका विभागहरु गठन गर्छु भनेका थिए । अहँ, त्यतातिर उनको ध्यान नै छैन । पार्टी संगठन निष्क्रिय प्राय छ, पार्टीको गतिविधि शून्यप्राय छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु बेरोजगार प्राय भएका छन् ।
माओवादी मधेसवादीको पुच्छर बन्ने नीति लिएपछि कांग्रेसप्रतिको जनसमर्थन नराम्रोसंग खस्किएको छ भने आकर्षण त झनै घटेको छ । न संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेसलाई वास्ता छ, न पार्टीको विधान कार्यान्वयनमा । सभापति देउवा विगतमा एक व्यक्ति एक पद भन्थे तर अहिले सभापति पदमा छँदाछँदै प्रधानमन्त्री बन्ने चक्करमा छन् । विगतका सभापतिहरुलाई विधान अनुसार, पार्टी चलाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्थे तर अहिले सभापति देउबाटै कांग्रेसको विधानकै बेहाल भएको छ । पार्टीमा कसलाई कसो गर्ने भन्ने समेत भारतीय राजदूतावासले तय गर्छ भनेर कांग्रेस भित्रैबाट लागिरहेको आरोपमा सभापति देउवा चूँ बोल्दैनन् । अर्थात्, कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी त हो तर सबैभन्दा कमजोर र नालायक पार्टी समेत बन्दैछ ।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरु विधिविधान अनुसार चल्नुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा दलहरु उदाहरण बन्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वास्थ्य र बाह्य व्यवहार त्यो दलका कार्यकर्ताको मात्र सरोकारको विषय होइन, आम नागरिकको सरोकारको विषय हो । किनभने दलको हैसियत नागरिकको मतले बन्ने हो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको जिम्मेवारी पाउनु भनेको निश्चित दायित्व पूरा गर्नु पनि हो । कांग्रेसलाई जनताले अगुवा बन्न मत दिएका हुन्, पिछलग्गू बन्नलाई होइन । कांग्रेसबाट जनताले समाधानको आश गरेका छन्, आफै समस्या बन्न मत दिएका होइनन् । पार्टीको आन्तरिक विधान कार्यान्वयन गर्दै देशको संविधान कार्यान्वयन गर्नु र चुनावका लागि आवश्यक तदारुकता देखाउनु नै अहिले कांग्रेसको कार्यभार हो । यो कार्यभारबाट यसरी नै चुक्दै गएमा कांग्रेसलाई जनताले माफ गर्ने छैनन् । कांग्रेसजनलाई चेतना भया ।
(वरिष्ठ पत्रकार बुढाथोकी सा“घु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
2/06/2017 03:21:00 PM